Qaab dhismeedka guddi fudud, aluminium, ka badan 75% -95% daahfurnaan.
Si fudud loo dejiyo oo loo rakibo, rakibid gaar ah oo la heli karo.
Gabi ahaanba gudaha, ka hortagga UV-ga ama Semi-bannaanka, 100% ilaalinta UV waxay noqon kartaa ikhtiyaari.
Shaashadda ugu caansan uguna caansan ee shaashadda 'LED', labadaba iskudhafan iyo xakamaynta asynchronous waa la taageeri karaa.
1.Dheeraad Sare oo Muuqaal ah: Waxay ku habboon tahay dadka gudaha iyo dibaddaba inay eegaan. Nalalka isku dhafan ee loo yaqaan 'LED lamp' waa kuwo aad u yar oo ku dhowaad aan laga arki karin banaanka dhismaha.
Naqshadaynta naqshadeynta iyo miisaanka fudud: dhumucda guddiga LED waxay ku dhowdahay dhisme kasta oo muraayad derbi ah. Miisaanka ayaa ah 6kg / kabadh oo kaliya wuxuuna yareeyaa culeyska derbiga galaaska ah.
3. Fududaynta Rakibaadda iyo Dayactirka: Looma baahna in wax laga beddelo qaab dhismeed kasta. Moduleyaashu waxay ku dhegi karaan dhabarka darbiga dhalada xabagta qaaska ah ee aan soo bandhignay. Waxay u baahan tahay oo keliya 10 ilbiriqsi si loo rakibo hal module. Haddii dayactir kasta dhaco, waxay u baahan tahay oo keliya in lagu sameeyo gudaha gudaha.
Codsiyo kaladuwan oo ballaaran: Codsi ballaaran oo loogu talagalay suuqyada wax laga iibsado, derbiga weyn ee muraayadda dhismaha, muuqaalka muuqaalka asalka ah, casino, carnival, riwaayad, carwo, dukaamo silsilad iyo dukaanka dharka, xitaa daaqadda gadaal, iwm. dhalaalka aad u sarreeya ee dibadda.
Nidaamka guud: haqabtiro baahiyaha aasaasiga ah ee muujinta joogtada ah Nidaamka loo habeeyay: waxaa lagu dabaqay qaabeynta muuqaalka magaalooyinka, qaabeynta asalka marxaladda. Nidaamka oo dhan wuxuu ku saleysan yahay isku-darka muuqaalka hal-abuurka & iftiinka muuqaalka.
LED Transparent VS bandhig dhaqameed:
1. Miisaanka fudud & culeyska dabaysha oo hooseeya. Eachinled LED mesh daahfurnaanta illaa 70% waxay si wax ku ool ah u yareyneysaa dabaysha-jiidashada.
2. Rakiib deg deg ah, qaab dhismeed bir ah oo aan cago lahayn, labadaba hore & gadaal gadaal; Rakibid la'aan - hawo la'aan macnaheedu waa isticmaalka tamarta oo hooseeya.
3. Dayactir fudud: dayactirka hore iyo gadaalba; dhowr boolal si loo kala furfuro baararka iftiinka iyada oo aan la beddelin golaha wasiirrada; ama waad ka saari kartaa golaha wasiirada si dhakhso ah markaa dayactir baarka iftiinka.
4. Naqshad heer sare ah oo isku dhafan, nacas aan caddayn lahayn, koronto ku dhisan & kaar qaadasho, cutubkiiba shaqsi ayuu u shaqeyn karaa; Awoodda iyo ishaarooyinka wadaaga silig isku mid ah.
5. Qiimeyn sare oo IP ah illaa IP65, qaybo wax ku ool ah iyo tikniyoolajiyad aad u fiican, waxqabad deggan.
Taxanaha Transparent ECO SMD VS Dhaqanka SMD
Codsiga: Marxaladda; Wadahadal; Dhacdooyinka, iwm
2. Naqshadeynta Isukeenka iyo Miisaanka Iftiinka: dhumucda guddiga LED-ka wuxuu ku dhow yahay inuu ku habboon yahay dhismaha derbiga muraayad kasta. Miisaanka ayaa ah 6kg / kabadh oo kaliya wuxuuna yareeyaa culeyska derbiga galaaska ah.
5. Nidaamka guud: la kulmo baahiyaha aasaasiga ah ee muujinta joogtada ah Nidaamka loo habeeyay: waxaa lagu dabaqay qaabeynta muuqaalka magaalooyinka, qaabeynta asalka marxaladda. Nidaamka oo dhan wuxuu ku saleysan yahay isku-darka muuqaalka hal-abuurka & iftiinka muuqaalka.